Dugsi | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Da’ yar iyo Iswiidhan / Dugsi
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 5 7 2019
Waxaa jiro sharciyo kala duwan oo ka hadlaayo habka uu iskuulka ahanaayo si dhamaan caruurta iyo dhalinyarade ee hormari karaan sida ugu fiican. Iskuulku tusaale ahaan waxuu tixgalinaa ardayda baahidooda kala duwan. Qorshooyin waxbarasho ee kala duwan ayaa jiro oo ka waramaayo waxa laga baranaayo maadooyinka kala duwan iyo fasalada. Halkan waxaad ka akhrin kartaa wixii ku saabsan iskoolka Iswiidhan.
Hadafka dhanka koorsooyinka sanadaha kala duwan iyo maadooyinka iskoolka
Iskoolku wuxuu leeyahay hadafyo kala duwan oo u dejisan. Waxaa jira hadafyo dhanka dugsiga hoose-dhexe ah oo guud iyo waxaa jira hadafyo loogu talogalay in lagu go'aamiyo haddii arday ku baasay maado. Waxaa jira sharaxaado dhanka waxa ay tahay inaad barato dhanka maadooyinka kala duwan iyo waxa ay tahay inaad awoodo si aad uga baxdo iskoolka.
Waxa ay tahay in qofku awoodo si gaaro heer cayiman iyo si loo awoodo in la sii gudbo waxay ku sharaxantahay waxa lagu magacaabo manhajka waxbarasho ee dugsiga hoose-dhexe iyo dugsiga sare.
Akhri dheeraad ku saabsan manhajka waxbarasho ee dugsiga hoose-dhexe, fasalka barbaarinta iyo hoyga xilli firaaqaha oo ku qoran bogga intarnatka ee Hey'ada Iskoolada.
Akhri dheeraad ku saabsan manhajka waxbarasho ee dugsiga sare oo ku qoran bogga intarnatka ee Hey'ada Iskoolada.
Qiimeynta iyo shahaado
Xilliga sanad-dugsiyeedyada 1-5 wuxuu ardaygu helaa qiimeyn dhanka maado kastaba. Qiimeyntan waxaa loogu talogalay inaad ku ogaato halka aad ka marayso dhanka maadooyinkan kala duwan.
Laga bilaabo sanad-dugsiyeedka 6 waxaad heli doontaa shahaado hal mar calaa nus sanadeedkii. Dhamaan maadooyinka dugsiga dhexe waxay leeyihiin shuruuda aqoonta. Shuruudaha aqoonta waxaa loogu talogalay inay sheegaan waxa ardaygu u baahanyahay si uu u gaaro shahaado cayiman. Darajada shahaado waxay leedahay lix darajo, laga bilaabo A ilaa F. Waxaa jira shan darajo dhanka baasida A, B, C, D iyo E. F waxay tahay in ardaygu aanu baasin.
Dhanka dugsiga sare waxay ardaydu shahaado ku helaan koorso kasta oo la dhamaystiray iyo shaqada dugsiga sare. Dhamaan koorsooyinka dugsiga sare waxay leeyihiin shuruuda aqoonta. Shuruudaha aqoonta waxaa loogu talogalay inay sheegaan waxa ardaygu u baahanyahay si uu u gaaro shahaado cayiman. Ka dib waxbarashadan waxaad helaysaa cadaynta shahaado haddii aad buuxisay shuruuda shahaadadan, haddii kale waxaa iskoolkan bixinayaa caddayn waxbarasho.
Waajibka iskool dhigashada
Iswiidhan waxaa ka jiro Waajib Iskuul dhigasho illaa dugsiga hoose -dhexe. Waajibka iskuul dhigashada waa xuquuq iyo waajib labadaba. Taasi macnaheedu waxa waaye inaad xaq u leedahay waxbarasho aasaasi ah, sidoo kale macnaheedu waa in aad ka qeyb qaadaneeyso waxa uu iskuulka qabanqaabiyo.
Waajibka iskool dhigashada waxay bilaabantaa xilliga dayrta ee sanadka ilmahani buuxinayo 6 sano. Fasalka barbaarinta waa khasab. Haddii ay jiraan sababo gaar ah ma bilaabanto waajibka iskool dhigashadu ilaa iyo ka hor xilliga dayrta ee ilmahani buuxinayo 7 sano. Xaaladaha qaarkood waxaa suurtagal ah in toos loo bilaabo dugsiga hoose-dhexe, dugsiga hoose-dhexe ee caruurta laxaadkoodu kala dhantaalanyahay ama iskool gaar ah. Waajibka iskool dhigashadu waxay badanaaba ansax tahay xilli ah toban sano.
Haddii aadan keenin waxbarashada la iska rabo marka waajibka iskuulka uu dhamaanayo, waxaad xaq uu leedahay in aad waxbarashada dhameeystirto muddo laba sano gudaheed ah. Taas macnaheedu maahan in la dheereeyey waajibka iskuul dhigashada. Waxaad kaloo dooran kartaa inaad bilaawdo barnaamijka hordhaca ee dugsiga sare. Waa adiga qofka dooranayo haddii aad sii joogeyso dugsiga hoose -dhexe ama aad bilaabeyso barnaamijka hordhaca ee dugsiga sare. Waajibka waxbarashada ma khuseeyo dugsiga sare lakiin adiga dhigta barnaamij dugsiga sare waxa lagaa filayaa inaad ka qeyb qaadato waxbarashada.
Ugu yaraan hal mar nus sanad-dugsiyeed kastaba waa in macalinka, ardayga (adiga) iyo qofka wakiilka kaa ah ama waalidkaa yeelataan kulanka horumarinta. Xilliga kulanka horumarinta waxaa laga hadlaa sida ugu fiican ee lagaaga caawin karo inaad horumarto. Waxaa laga hadlaa horumarka aqoonta iyo horumarka dad la dhaqan labadaba.
Waafajin dheeraad ah iyo taageero gaar ah
Adigu arday ahaan waxaad xaq u leedahay hawlo taageero gudaha iskoolka haddii aad khatar ugu jirto in aanad gaarin shuruuda aqoonta ee dhanka hal ama dhowr maado. Tani waxay ahaan kartaa baahida waafajin dheeraad ah ama taageero gar ah. Waafajinta dheeraadka ah badanaaba way ka yartahay hawlaha taageerida ee gudaha waxbarashada caadiga ah.
Haddii arday helay waafajin dheeraad ah khatar ugu jiro in aanu gaarin shuruuda aqoonta waa in macalinku arrintan wargeliyo maamulaha iskoolka. Maamulaha iskoolka ayaa baaraya haddii ardaygan u baahanyahay taageero gaar ah. Haddii baaritaankan muujiyo in ardaygu u baahanyahay taageero gaar ah waa in iskoolku sameeyo barnaamijka talaabooyinka la qaadayo.
Waa wax iskeed loo doorto in la aado dugsiga sare. Dugsiga sare waxaad ka dhigan kartaa barnaamijyo qaran oo kala duduwan ama barnaamijyo hordhac ah. Barnaamijyada qaranka waxaa ku jira barnaamijyo xirfadeed iyo barnaamijyada isu diyaarinta jaamicadda.
Si aad u hesho barnaamij xirfadeed waxaa lagaa rabaa inaad haysato shahaaddo baasitaan oo ku aaddan af Iswiidhishka ama af Iswiidhish oo luqad labaad ahaan ah, af Ingiriisi, xisaab iyo shan maaddo oo dheeraad ah. Micnhii waxaa loo baahanyahay shahaaddo baasitaan ah ku aaddan isu geyn siddeed maaddo.
Si aad u awoodo inaad tegi karto barnaamijka u diyaarinta jaamicada waxaa loo baahanyahay in aad ku baastay iswiidhishka ama iswiidhishka oo luqad labaad ahaan ah, ingiriisi, xisaab iyo sagaal maado oo dheeraad ah. Waxay tahay in loo baahanyahay ku baasida isu geyn laba iyo toban maado.
Haddii u qalmin barnaamijyada qaranka waxaad wax ka baran kartaa mid ka mid ah barnaamijyada hordhaca ah. Barnaamijyada hordhaca way dabacsan yihiin markay noqoto dhinaca xawaaraha waxbarasho, baaxadda iyo nuxurka. Barnaamijyadan waa inay xitaa yihiin kuwo la waafajiyo aqoonta aad horey u haysatay iyo baahidaada.
Waxaa jira doorashooyin kale
Haddii aanad helin shahaado lagu geli karo jaamicad ama kuliyad dhanka waxbarashada dugsiga sare waxaa jira doorashooyin kale.
Akhri dheeraad ku saabsan waxbarashada dadka waaweyn oo ku qoran bogga intarnatka ee Hey'ada Iskoolada
Akhri dheeraad ku saabsan waxbarashooyinka xirfadeed oo ku qoran bogga intarnatka ee Kuliyadha xirfada
Akhri dheeraad ku saabsan kuliyada dadka waaweyn oo ku qoran bogga intarnatka ee Folkhögskola.nu
Halkan waxaa ku jirta warbixin dheeraad ah oo ku saabsan waxbarashooyinka kala duwan iyo kaalmada laga helo CSN.
Haddii aad hayso aragtiyo ama aanad ku qanacsanayn wax ku saabsan iskoolka
Haddii aad hayso aragtiyo ama aanad ku qanacsanayn wax ku saabsan iskoolkaaga waa inaad ugu horeyn la xiriirtaa macalinka ama maamulaha iskoolkaaga.
Haddii aad dareemayso in macalinka ama maamulaha iskoolka aanay ku dhagaysanayn waxaad la xiriiri kartaa mas'uuliyiinta iskoolkan. Mas'uuliyiintu waa degmada dhanka iskool degmo iyo hogaanka dhanka iskoolada madaxa banaan. Haddii weli aanad u arkin in aragtidaada la tix-geliyay waxaad ashkato u gudbin kartaa Kormeerka Iskoolada. Kormeerka iskoolada waa hey'ad dawladeed oo ka warhaysa shaqada iskoolada.
Wakiilka caruurta iyo ardayda (BEO)
Dadka oo dhan waxay xaq u leeyihiin inay amaan ku helaan gudaha iskoolka. Haddii si kastaba ha ahaatee laguula dhaqmay si xun ama lagu faquuqay waa in iskoolku ku caawiyo. Waxaad la xiriiri kartaa Wakiilka caruurta iyo ardayda (BEO) haddii si xun ay kuula dhaqmeen ardayda kale ama dadka waaweyn ee jooga iskoolka.
Akhri dheeraad ku saabsan sida aad ula xiriiri karto Wakiilka caruurta iyo ardayda (BEO)
Akhri dheeraad ku saabsan xuquuqda iskoolka oo ku qoran bogga intarnatka ee Kormeerka iskoolada, BEO.
Nidaamka iskoolada ee iswiidhishka wuxuu ka koobanyahay hawlo kala duwan oo badan iyo qaabab waxbarasho. Halkan hoose waxaa ku qoran guud mar yar.
Dugsiga xanaanada waa hawl kooxeed wax barid looguna talogalay caruurta laga bilaabo 1 sano ilaa iyo bilowga iskoolka. Caruurtu waxay dugsiga xanaanada ku bilaabaan da'yo kala duwan waxayna ka qayb qaataan wakhtiyo dhererkoodu kala duwanyahay. Hawsha dugsiga xanaanada waa inay u suurto-geliso waalidka inay waalidnimada ku dhex daraan shaqo ama waxbarasho.
Fasalka barbaarinta waa nidaam iskool oo waajib ah. Caruurta badankoodu waxay dhigtaan fasalka barbaarinta laga bilaabo bilowga sanad dugsiyeedka ay buuxinayaan 6 sano. Waxbarashadan waa inay dar-dargeliso caruurta horumarkooda una diyaariso waxbarasho sii socota.
Hoyga xilli firaaqaha
Degmooyinka waxaa waajib ku ah inay bixiyaan hoyga xilli firaaqaha ilaa iyo nus sanad-dugsiyeedka xilliga gu'ga ee ilmuhu buuxinayo 13 sano. Degmooyinku waxay bixin karaan hawsha hoyga xilli firaaqaha oo furan taas oo baddel u ah hoyga xilli firaaqaha laga bilaabo nus sanad-dugsiyeedka bilaabma dayrta ee ilmahani buuxinayo 10 sano. Hoyga xilli firaaqaha waa inuu dhamaystir u ahaado fasalka barbaarinta iyo iskoolka si loogu suurto-geliyo waalidka inay waalidnimada ku dhex daraan shaqo ama waxbarasho.
Xanaanada wax barida
Degmooyinku waa inay ku dadaalaan inay baddelka dugsiga xanaanada ama hoyga xilli firaaqaha siiyaan caruurta xanaano wax barid haddii sidaas la doonayo.
Waxbarashada dugsiga hoose-dhexe
Iskoolka caruurta laxaadkoodu kala dhantaalanyahay
Iskoolka caruurta laxaadkoodu kala dhantaalanyahay waa inuu dhamaan caruurta leh dhibaato horumarineed siiyaan waxbarasho ku haboon ilmo kastaba awoodihiisa.
Waxbarashada dugsi sare waxay bixisaa aqoonta aasaasiga ah ee sii wadashada waxbarasho iyo dhinac nolol xirfadeed oo mustaqbalka ah. Xagga dugsiga sare waxaa laga helaa 18 ah barnaamijyada dugsiga sare: lix ah barnaamijyada isu diyaarinta jaamicad iyo 12 ah barnaamijyo xirfadeed. Waxa kale oo jira lix ah barnaamijyada dugsiga sare ee dalka oo dhan laga dooran karo iyo afar ah barnaamijyada hordhaca ah.
Dugsiga sare ee caruurta laxaadkoodu kala dhantaalanyahay
Waxaa jira barnaamijyo qaran iyo barnaamijyo shakhsiyan ah oo la kala dooran karo. Ka hor intaan arday bilaabin dugsiga sare ee caruurta laxaadkoodu kala dhantaalanyahay waxaa degmadu samaysaa qiimeyn waxbarasho, cilmi-nafsi, dhakhtareed iyo bulsho ahaan ah si loo ogaado haddii tani tahay qaabka iskool ee saxda u ah ardaygan.
Akhri dheeraad ku saabsan iskoolada oo ku qoran bogga Hey'ada Iskoolada Bogga intarnatka ee Utbildningsinfo waxaad ka helaysaa caawimaada in la doorto waxbarasho xilliga doorashada dugsiga hoose-dhexe, waxbarashada dugsiga sare iyo waxbarashada dadka waaweyn. Wixi dheeraad ah ka akhri Hey’adda Waxbarashada boggeeda intarnatka ee Utbildningsguiden. Akhri dheeraad ku saabsan jaamicadaha iyo kuliyadaha oo ku qoran bogga intarnatka studera.nu
Halkan waxaa ku jira macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxbarashooyinka kala duwan iyo kaalmada iyo taageerada laga helo CSN.